रेस्क्यू र हतियारधारी पक्राउ गर्न ल्याइएको मेसिन लकडाउनमा प्रभावकारी
नारायण अधिकारी बुधबार, चैत १९, २०७६, ११:२९
काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई नेपाल प्रहरीले अहिले हातैले च्याप्प समात्दैन। सुरुका दिनमा हातैले समाते पनि लकडाउन भएको दुई/तीन दिनपछि भने प्रहरीले मेसिनमार्फत नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ।
यसरी मान्छेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ल्याएको मेसिनको नाम हो- मल्टिफंसनल एरेस्ट एण्ड रेस्क्यू डिभाइस।
नेपाल प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएको यो मेसिन कोरोना भाइरसका संक्रमित र संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भनेर ल्याएको भने होइन। र, यो एकाएक अहिले नै आएको पनि होइन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उमेशराज जोशीका अनुसार यो मेसिन आजभन्दा तीन वर्षअघि नै नेपाल प्रहरीले विशेष प्रयोजनाका लागि भनेर ल्याएको थियो।
तर यी मेसिन प्रयोगमा भने आएका थिएनन्। अहिले एकाएक प्रयोगमा आएको देखिएकाले कोरोना भाइरस संक्रमित र संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न ल्याइएको होला विमर्श हुनु स्वभाविक हो।
के प्रयोजनाका लागि ल्याइएको थियो?
विशेषगरी २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि यसप्रकारको मेसिनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। भूकम्पमा घर भत्किएर बीचमा च्यापिएर अड्केका मान्छे बाहिर निकाल्न सुरक्षाकर्मीलाई निकै असहज भएको थियो। सुरक्षाकर्मी त्यो चेपमा छिर्न नै गाह्रो र जोखिम थियो। त्यसबेला नेपालमा उद्दारमा खटिएका विदेशी सुरक्षाकर्मीले समेत यसप्रकारको मेसिनमार्फत च्यापिएका मान्छेको उद्दार र शव निकाल्ने गरेका थिए।
त्यस्तै प्रयोजनाका लागि भनेर त्यसपछि नेपाल प्रहरीले यो मेसिन भित्र्याएको थियो। त्यही मेसिन नै अहिले कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रयोग गरिएको हो।
अहिलेको अवस्थामा यो मेसिनको प्रयोग निकै प्रभावकारी रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा डिआइजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन्।
‘कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले प्रहरीले पनि आफू जोगिदै सोसल डिस्टान्स कायम गर्दै मान्छेहरु नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्थामा यो मेसिन निकै प्रभावकारी भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘प्रहरीमा यदि संक्रमण रहेछ भने पक्राउ पर्ने सर्वसाधारणमा पनि नसर्ने भयो। सर्वसाधारणबाट पनि प्रहरीलाई नसर्ने भयो।’
यो मेसिन त्यसबेला विशेषत दुई वटा कामका लागि ल्याइएको थियो।
पहिलो, कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने छ। तर उ छुरा, खुकरीजस्ता धारिलो हतियार बोकेर बसेको छ। र, पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने सम्भावना छ भने यो मेसिनको प्रयोग गरेर मान्छे पक्राउ गरिन्छ।
दोस्रो, गुफा तथा खोँचमा मान्छे फसेको वा च्यापिएको छ तर सुरक्षाकर्मीले मात्रै उद्दार गर्न सम्भव छैन भने यो मेसिनको सहयताले उद्दार गर्न सहज हुन्छ। यिनै प्रयोजनका लागि प्रहरीले यो मेसिन भित्र्याएको हो।
तर अहिले विश्वभर माहामारीको रुपमा लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोखिन यही मेसिनमार्फत प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ। बोगटी भन्छन्, ‘यसबाट पक्राउ गर्ने सुरक्षाकर्मी पनि सुरक्षित हुने भए। सोसल डिस्टान्स पनि कामय हुने भयो। यो निकै प्रभावकारी भएको छ।’
हेडक्वाटरमा थन्काएर राखेको ६ वटा मेसिन ल्याएर काठमाडौं प्रहरीले सुरुमा काम गरेको थियो। यो निकै प्रभावकारी भएपछि थप तीन वटा मेसिन ल्याएर काम गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका मान्छेको बढी चाप हुने क्षेत्रका वृत्तहरुलाई अहिले यो डिभाइस उपलब्ध गराइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटी बताउँछन्।
के छ यसको विशेषता?
प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएको मल्टिफंसनल मेसिन ३ मिटर लामो छ। तर यसलाई आवश्यकता अनुसार यसभदा छोटो पनि बनाउन मिल्छ। अर्थात्, यो मेसिन फोल्ड गर्न मिल्ने किसिमको छ।
यसले अटोमेटिक स्वीचमार्फत काम गर्छ। स्वीचमार्फत तै फोल्ड हुने, स्वीचमार्फत नै चोक खुल्ने र मान्छे पक्राउ गरिसकेपछि चोक लक हुने गर्छ।
यसरी चोक खुल्ने र च्याप्ने काम स्प्रीङमार्फत हुन्छ। मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि दायाँबाँया चहलपहल गर्न सक्दैन। त्यसपछि प्रहरीले आफूले चाहेको ठाउँमा धकेलेर लान सक्छन्।